पुरुषको कुमारत्व कसरी परिक्षण गर्ने ? अचम्म र विचित्रका वैज्ञानिक प्रश्नोत्तरहरु – tvNepali.net
पुरुषको कुमारत्व कसरी परिक्षण गर्ने ? अचम्म र विचित्रका वैज्ञानिक प्रश्नोत्तरहरु
मानिसहरुको मनमा विभिन्न खालका प्रश्नहरु आउने गर्दछन जसको बारेमा थाहापाउनका लागी उनीहरु निकै उत्साहित पनि हुने गर्दछन । मानिसहरुले धेरै जसो कुराहरु आफ्नो ब्यबहारमा सुन्दै वा थाहापाउदै आएपनि उक्त कुराको प्रमुख कारण भन्ने थाहा नहुन सक्छ । जस्तै : पुरुषहरुको कुमारत्व कसरी परिक्षण गर्न सकिन्छ ?, पृथ्वीबाट सुर्य कति टाढा छ ?
यस्ता कुराहरु सुन्नमा आए पनि यसको जवाफ भने धेरैलाई थाहाहुदैन । हामी तपाईलाई बिचित्र तथा बैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित केहि प्रश्नोत्तर देखाउने छौ । जुन तपाइले आफ्नो दैनिक जीवनमा सुन्दै आइरहनु भएको छ तर त्यसको जवाफ वा प्रमुख कारण भन्ने थाहा छैन । आउनुहोस् हामीले GyanBigyan च्यानलबाट साभार गरिएको यो भिडियो हेर्नुहोस् :
PreviousPrevious post:किन दुख्छ ढाड ? ढाडको दुखाई अब यसरी सजिलै निको पार्नुहोस्
Next Next post:एभरेष्ट आर्ट फ्यूजनले सुरु गर्यो सेरामिक तालिम
दुईजना पुरुषको शव वेवारिसे अवस्थामा फेला